Baro Kaydadka Cryptocurrencies - Cazoo
Waa maxay Cazoo?
Saxeex ku saabsan Binance
Ku qor raadintaada halkan
Bogga ugu weyn » Baro cryptocurrencies
Waa maxay AMM, Sameeyaha Suuqa Atoomatiga ah?
Sameeyayaasha Suuqa Atoomatiga ah waxay ku dhiirigeliyaan isticmaalayaasha inay noqdaan bixiyayaasha dareeraha ah iyagoo ku beddelaya qayb ka mid ah khidmadaha wax kala iibsiga iyo calaamado bilaash ah. Markii Uniswap ay ku dhalatay...
AkhrisoWaa maxay AMM, Sameeyaha Suuqa Atoomatiga ah?
Dib-u-eegista Beddelka Gate.io 2021, ma ammaan baa in la iibsado Bitcoin?
Qeybta Sheyga:Aasaaska Cryptocurrencies
Haddii aadan hubin sida loo iibsado Bitcoin, waxaa laga yaabaa inaadan aqoon waxa loo yaqaan 'Exchange'. Isweydaarsiga loo yaqaan 'cryptocurrency Exchange', waa ganacsi u oggolaanaya macaamiisha inay ka ganacsadaan cryptocurrencies ama lacagaha dhijitaalka ah…
AkhrisoDib-u-eegista Beddelka Gate.io 2021, ma ammaan baa in la iibsado Bitcoin?
Nidaamyada dhexe iyo dhexe
Qeybta Sheyga:Baro cryptocurrencies
Fikradda dhex-dhexaadintu waxaa loola jeedaa sida loo qaybiyo awoodda iyo maamulka urur ama shabakad. Markuu nidaamku udub dhexaad u yahay, macnaheedu waa farsamooyinka qorshaynta iyo ...
AkhrisoNidaamyada dhexe iyo dhexe
Qeybta Sheyga:Baro cryptocurrencies/Aasaaska Cryptocurrencies
Xarig la'aan waxaa loola jeedaa lambar ama qiime la isticmaali karo hal mar oo keliya. Xargaha waxaa badanaa loo adeegsadaa hab maamuuska xaqiijinta iyo howlaha haashka ee loo yaqaan 'cryptographic hash function'.
Waa maxay shabakad aan aamin lahayn, iyada oo aan loo baahnayn kalsooni
Nidaam aan kalsooni lahayn waxaa loola jeedaa kaqeybgalayaasha ku lugta leh uma baahna inay is ogaadaan ama aaminaan midkoodna ama dhinac saddexaad nidaamka inuu shaqeeyo. Deegaan aan ...
AkhrisoWaa maxay shabakad aan aamin lahayn, iyada oo aan loo baahnayn kalsooni
Waa maxay Ethereum?
Qeybta Sheyga:Baro cryptocurrencies/Shabakadaha
Waxaa la bilaabay 2015, shabakada Ethereum waa xannibaad hor u marisay adeegsiga qandaraasyo caqli badan oo lagu dhisayo codsiyada la qorsheysan karo, iyada oo aan loo baahnayn kalsooni - kalsooni la'aan - iyo ...
AkhrisoWaa maxay Ethereum?
Maxay uga dhigan tahay macdanta 'cryptocurrencies' iyo sida howlaha macdanta ay u shaqeeyaan
Macdanta loo yaqaan 'Cryptocurrency', oo sidoo kale loo yaqaan 'cryptocurrency mining,' waa habka ay macaamil u dhexeeyaan dadka isticmaala loo xaqiijiyo oo lagu daro buugga, buugaas weyn, ee gebi ahaanba dadweynaha, ...
AkhrisoMaxay uga dhigan tahay macdanta 'cryptocurrencies' iyo sida howlaha macdanta ay u shaqeeyaan
Tikniyoolajiyadda hoosta ka xariiqda adduunka ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' waa caanka xannibaadda 'blockchain' wuxuu u oggolaanayaa qof kasta oo adeegsada shabakadda inuu gaaro is afgarad iyada oo aan daruuri ahayn inuu midba midka kale aamino ...
Ereyga xashi ayaa loola jeedaa xawaaraha uu kombiyuutarku ku samayn karo xisaabinta xashiishka. Marka la eego Bitcoin iyo cryptocurrencies, heerka xashiishka ...
Jiritaan la'aanta macnaheedu waa awood la'aanta in la beddelo. Cilmiga kombuyuutarka, sheyga aan beddelmi karin waa shay aan xaaladdiisa la beddeli karin abuuritaankeeda ka dib. Guur la'aanta waa mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ...
Waa maxay noodhadhku?
Noodhku wuxuu leeyahay macne ka duwan qaabkiisa. Adduunyada shabakadaha, shabakadaha isgaarsiinta ama xitaa kumbuyuutarrada, noodhadhku waxay leeyihiin astaamo si wanaagsan loo qeexay: way awoodaan ...
AkhrisoWaa maxay noodhadhku?
Waa maxay Degdeggu?
Maaliyad ahaan, isbeddelku wuxuu sharraxayaa sida ugu dhakhsaha badan iyo inta qiimaha hantida isbeddelaysaa. Badanaa waxaa lagu xisaabiyaa marka la eego qallooca caadiga ah ee soo noqoshada hantida ee sanadlaha ah ...
AkhrisoWaa maxay Degdeggu?
Ma jiraan bogag dheeri ah oo la raro
Maqaallo duug ah →
Xuquuqda daabacaadda Cazoo.it 2021
Waxaa waajib igu ah inaan kuu sheego in biraawsarkaagu keydiyo cookies. ¯ \_ _ (ツ) _ / ¯